Mareykanka oo sheegay inuu baarayo dad shacab inay wax ku noqd... | Universal Somali TV
Mareykanka oo sheegay inuu baarayo dad shacab inay wax ku noqdeen duqeyn ka dhacday Shabellaha hoose
Qoraal ka soo baxay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu sheegay inay baarayaan wararka sheegaya eedeymaha la xiriira dad shacab ah inay ku waxyeeloobeen duqeyn ka dhacday Gobolka Shabellaha hoose.
Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay hawlgal ay si wadajir ah isaga kaashadeen ciidamada Somalida iyo kuwa Mareykanka in laga fuliyay deegaano ka tirsan Shabellaha hoose.
Hawlgalkaasi ayuu Mareykanka ku sheegay in looga hortgaayay awoodaha Kooxaha argagixisada ah ee Somaliya ka dagaalama, wuxuuna Mareykanka xaqiijiyay inay sii wadayaan beegsiga Shabaab.
“Waxaan ka warhaynaa tuhun ku saabsan in khasaare dad rayid ah uu ka dhashay weerarkaas, waxaana warbixinnadan u qaadaneynaa si dhab ah. Waynu eegi doonaa Wararka ku saabsan dhacdadan, haddii aan helno in eedeymahan ay yihiin kuwa sax ah, waxaa taliska AFRICOM uu qaadi doonaa tallaabooyinka xiga ee ku habboon” ayaa lagu yiri qoraalka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in wasaaradda gaashanadhigga Mareykanka ay ka go’an tahay inay ka hortagto halista argagixisada dunida, ayna taageeri doonto dalalka gobolka ee arrintana awoodda u leh. Waxaa sidoo kale lagu sheegay in taliska AFRICOM uu ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Amisom kula midoobay ka hortagga argagixisada.
Kan-horeShabaab oo tiro madaafiic ah saaka ku...
38,729,223 unique visits